WARBIXIN: Fartuun Cismaan waa hooyo iyo macallin soo saarta cayaartoy
Home Somali News WARBIXIN: Fartuun Cismaan waa hooyo iyo macallin soo saarta cayaartoy
Akhriste waa dhif iyo naadir ama ma badna haweenka tababbarayaasha ama macallimiinta ee dhinaca Sportska ee Soomaalida.
Fartuun Cismaan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo deggan gobalka Minnesota ee dalka Mareykanka waa tababbare dhinaca kubadda cagta, kubadda kolayga iyo Oradada.
Fartuun ayaa soo saarta cayaartooy xirfad ku dhex leh Sportska kuwaasoo u badan gabdho yer yer oo waliba Hijaaban oo dhaqanka Islaamka ka muuqdo marka ay kubadda cayaarayaan.
Tababarre Fartuun ayaa hoggaamineysa gabdhaha muslimiinta ee ku dhex jira Sportska dalka Mareykanka isla markaana soo saara cayaartoy kala duwan oo ka dhex muuqda cayaaraha.
Fartuun ayaa horrey uga mid ahayd cayaartooydii kubadda kolayga ee Muqdisho ama Munishiibiyo, isla markaana waxa ay ka tirsaneed cayaartoydii xulka qaranka gabdhaha ee kubadda kolayga.
Tababbare Fartuun Cismaan ayaa hadda cayaartoy ka badan 70 oo gabdho ku tababartaa gobalka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka.
Cayaartoyda ay tababarto ayaa da’dooda waxa ay isugu jirtaa sideed sanno iyo ilaa 18 sanno, sida uu sheegay wariyaha VOA ee St. Paul Maxamuud Mascadde.
Tababarre Fartuun ayaa xirfadda macallinimada billowday sannadkii 1996-dii waxaana marwalba ay maanka ku heysay sidii loo heli lahaa gabdho cayaaraha ku wanaagsan oo matala xulka qaranka Soomaaliya maadama fursado badan ay heli karaan gabdhaha ku nool Qurbaha.
Tababbare Fartuun Cismaan waa hooyo afar carruur kaligeeda korsata oo hadda seddax cayaar oo kala duwan ay u tababbare ka ah, soo dhicinta nolal maalmeedkana u dheer tahay waana xaqiiq in fulinta howlahaas oo dhan ay kala kulmi karto caqabado dhowr ah.
Dalka Mareykanka ayaa waxa ay tagtey sannadkii 1996-dii xilligaas oo ay ka carartey dagaalladii ka dhacay dalkeeda Soomaaliya, sidaas waxaa qoray Wargeyska Startribune ee Minnesota ka soo baxa.